नेपाली नायिकाको अहिले यो हाल ,पहिले कस्ति थिइन अहिले यस्ति भइन,कठै बिचरा (हेर्नुस् भिडियो ) – Kavrepati
Home / समाचार / नेपाली नायिकाको अहिले यो हाल ,पहिले कस्ति थिइन अहिले यस्ति भइन,कठै बिचरा (हेर्नुस् भिडियो )
admin June 10, 2021	समाचार Leaveacomment 368 Views
नेपाली कला क्षेत्रमा जम्दै गरेको एउटा नाम हो निशा घिमिरे । कुनै बेला च’मकधमक रहेको उनको जिन्दगी अहिले बे’सहारा बनेको छ । निकै नै द’यनीय अवस्थामा उनलाई देख्न सकिन्छ । उनको अहिलेको यो अवस्था देख्दा नि’स्शब्द नुहने सायदैं होलान् ।
कलाकारितामा उच्च शिक्षाको क्रममा भारतमा सवारी दु’र्घटनामा परेकी उनको उपचार राम्रोसम्ग भइरहेको छैन ।उपचारको अभावले उनका यो अवस्थामा पुगेको चलचित्रकर्मी दीपक राज पाठकले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् । उनी लेख्छन्, ‘केही दिन पहिले पहिलो पटक टिकटकमा उहाँको यस्तो ना’जुक अवस्था देख्दा आँसु रोकिएन मेरो !
निशाको परिवारको आर्थिक अवस्था नाजुक भएका कारण सक्ने सवैमा सहयोगको लागि हार्दिक अ’पिल गरिएको छ । सहयोगका लागि मोडल निशाका बुवालाई सिधा सम्पर्क प्रेम प्रसाद घिमिरे ९८५१२३८९५२ मा गर्न सक्नुहुन्छ । उनको शिघ्र स्वास्थ्य लाभका भगवान् पशुपतिनाथ सँङ्ग यहि प्राथना गर्दछु ! आजभन्दा करिव ४ वर्षअघिको अन्तरवर्ता
Previous १ सय ४८ वर्षपछि भोलि जुर्ने भयो दुर्लभ संयोग, ४ राशिलाई लाभै-लाभ !
Next लकडाउन खुकुलो भएपछि यी १० जिल्लामा ह्वात्तै बढ्यो कोरोना